मुगु : प्रहरी सुरक्षा घेराकाबीच शोबा मतदान केन्द्र विप्लव माओवादीको कब्जामा !
ARCHIVE, ELECTION EXPRESS, POLITICS » मुगु : प्रहरी सुरक्षा घेराकाबीच शोबा मतदान केन्द्र विप्लव माओवादीको कब्जामा !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मुगुको एक मतदान केन्द्र कब्जा गरेको छ । मुगुको राराछायानाथ नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित प्रहरी सुरक्षा घेराको बीचमा रहेको शोबा मतदान केन्द्र कम्युनिष्ट पार्टीले कब्जामा लिएको हो । घटनाको पुष्टि गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डिएसपी सारदा प्रसाद चौधरीले मतदान केन्द्रमा तोडफोड समेत भएको बताएका छन् ।
'मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी खटिएको थियो तर, उनीहरु धेरैको संख्यामा आएकाले प्रतिकार गर्न सकिएन ।' डिएसपी चौधरीले भने - ' मतदान केन्द्रमा तोडफोड पनि भएको छ । उनीहरुको खोजीकार्य सुरु गरका छौं ।'
यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नीति अनुसार नै मतदान केन्द्र कब्जामा लिएको बताउदै त्यहि नीति अनुसार प्रहरीको हतियारलाई भने त्यहि छोडिदिएको बताएको छ ।